Akụkọ - Gịnị Bụ Ebu Ala?
Gịnị bụ ebu ebu?
Ebu ebu zuru oke maka imeputa ihe ndi puru iche site na ịpị ma ọ bụ iweghachi.
Na mgbakwunye, a na-akpọkwa nkwado nke ebu ihe ebu ebu. Dị ka ihe atụ, ndị na-anwụ-mgbatị igwe agwakọta ma na-edozi akụkụ dị iche iche nke ebu dị ka otu mgbe na ọnọdụ, na akụkụ nke nwere ike ndokwasa na-anwụ-mgbatị igwe a na-akpọ ebu isi, na pushing usoro, na usoro ndu, na mgbochi mgbochi Usoro nrụpụta nwere mpempe akwụkwọ ịnwụ na akwa oche.
Ka ọ dị ugbu a, itinye ihe eji ebu ihe ọ bụla metụtara ngwaahịa (dịka ụgbọ ala, ikuku, ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, nkwukọrịta eletriki, akụrụngwa ahụike, wdg). Ọ bụrụhaala na ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa, a ga-etinye ihe nrụpụta ebu, ihe ndabere ebu bụ akụkụ na-enweghị ike ịkọwa nke ebu. Ka ọ dị ugbu a, a ga-ekpebi ihe ziri ezi maka ntọala ebu dị ka ngwaahịa si chọọ dị ka ọkwa dị iche iche si dị.
The ebu isi bụ a ọkara okokụre ngwaahịa nke ebu, nke na-emi esịnede dị iche iche nchara efere kwesịrị ekwesị akụkụ, na nwere ike kwuru na-ọkpụkpụ nke dum ebu. N'ihi nnukwu ọdịiche dị na nhazi ahụ metụtara ntọala ebu na ebu, ndị na-emepụta ebu ga-ahọrọ ịtụ ntọala ebu site na ndị nrụpụta ebu, na-erite uru nke mmepụta nke akụkụ abụọ ahụ iji melite ogo na arụmọrụ zuru oke.
Mgbe afọ nke mmepe, na formwork mmepụta ụlọ ọrụ nwere matured. Na mgbakwunye na ntọala ọdịnala ọdịnala, ndị na-akpụzi ebu nwekwara ike ịhọrọ ngwaahịa ahaziri ahazi. Formkpụrụ ọkọlọtọ dị n'ụdị dịgasị iche iche, oge nnyefe dị mkpụmkpụ, ọbụnadị njikere iji ya, na-enye ndị na-emepụta ebu ihe mgbanwe dị ukwuu. Ya mere, ndị na-ewu ewu nke ọkọlọtọ formwork na-amụba.
Na mpempe, formwork nwere preforming ngwaọrụ, a n'ọnọdu ngwaọrụ, na ihe ejection ngwaọrụ. A na-ahazi ya dum dị ka ogwe osisi, bọọdụ (ihe atụ n'ihu), bọọdụ B (usoro azụ), bọọdụ C (nke nwere akụkụ anọ), efere ala, ogwe aka na-acha ọkụ, mpempe ala ala, na ntuziaka ntuziaka, nloghachi azụ na akụkụ ndị ọzọ.
Osote: Gịnị Bụ Runner System Of Ọgwụ Ebu
Nke gara aga: Gịnị Bụ The Asatọ Categories Of Ọgwụ Ebu?